कश्मीरमा पाकिस्तानी सेनासँगको भिडन्तमा ज्यान गुमाएका सैनिककी श्रीमतीले गरिन आत्महत्या, श्रीमानको शव घर आइपुग्दा उनले पनि पिडा सहन नसकेर कुवामा हाम फालिन «
कश्मीरमा पाकिस्तानी सेनासँगको भिडन्तमा ज्यान गुमाएका सैनिककी श्रीमतीले गरिन आत्महत्या, श्रीमानको शव घर आइपुग्दा उनले पनि पिडा सहन नसकेर कुवामा हाम फालिन
Published :5January, 2020 1:16 pm
नयाँ दिल्ली – जम्मु कश्मीरमा पाकिस्तानी सेनासँगको भि’डन्तमा ज्या न गुमाएका एक भारतीय सैनिककी पत्नीले देहत्याग गरेकि छन् । यो दर्दनाक घटना भारतको झारखण्डको हो । पतिको श व घरमा पुग्दा नपुग्दै उनले कुवामा हा म फालेर देहत्याग गरेकि हुन्।
देहत्याग गरेकि मनीता उराँवका पति बजरंग उराँव फौजमा कार्यरत थिए । कश्मीरमा डिसेम्बर ३० मा पाकिस्तानीसेना सँगको भि डन्तमा उनको ज्या न गएको थियो। मृ त बजरंगको श व गाँउ पुर्याइएसँगै बेहोस बनेकि पत्नीले देहत्याग गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस : भारतीय सेनामा निधन हुने नेपालीको श:व, परिवारले हारगूहार गर्दा पनि किन ल्याउन दिदैन भारतले ?
बिहे गरेर १२ दिन अघि छुट्टि सकेर फर्किएका थिए अर्जुन, उनको निधन संगै सिंगो गाउँ सोकमा !
जम्मु कश्मीरको नौशेरामा मङ्गलबार राति अर्जुनको ज्यान गएको खबरले यतिबेला सिङ्गो गाउँ नै शोकमा डुबेको छ ।
‘अर्जुनले लाहुरे बन्नकै लागि धेरै दुःख ग¥यो, तर खुसी लामो समय टिकेन,’ अर्जुनका मामा सुजीत थापा भन्छन् । ३ वर्षअघि मात्र आमा गुमाएका अर्जुन ११ कक्षा पढ्दापढ्दै भारतीय सेनामा गएका थिए । थापासँगै भारतको महाराष्ट्रस्थित सतारा जिल्ला निवासी सावन्त सन्दीपको पनि ज्यान गएको छ । अर्जुन र रघुनाथले भारतका लागि सर्वोच्च बलिदानी गरेको भन्दै भारतीय सेनाले विज्ञप्ती निकालेर प्रशंसासमेत गरेको छ ।
बुधबार नै भारतीय सेनाले अर्जुनको परिवारलाई घटनाको बारेमा जानकारी गराइसकेको छ । उनको श वलाई नेपाली सीमाना काँकडभित्तासम्म ल्याउने पारिवारले जानकारी दिएको छ । चार वर्षअघि भारतीय सेनामा भर्ना भएका अर्जुन एक महिनाको छुट्टीपछि पुस ५ गते कार्यक्षेत्रमा फर्किएका थिए । ६ महिनाअघि मात्र अर्जुन वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका थिए । तनहुँ दुले गौँडा अर्जुनको ससुराली हो ।
गोरखा नगरपालिका–६ को महेन्द्र ज्योति माध्यमिक विद्यालयसम्म अर्जुनले १० कक्षा पढेका हुन् । त्यसपछि ११÷१२ पढ्न अर्जुन द्रव्य साह कलेजमा भर्ना भएका थिए ।
बुढा बुबालाई अर्जुनले फोनमा बारम्बार ‘अब धेरै दुःख गर्ने होइन । अब त म पनि राम्रै ठाउँमा जागिरे भएको छु । हजुरलाई अब सुखको साथ पाल्नेछु,’ भनेका थिए ।
भर्खरै विवाह गरेका अर्जुनले मङ्गलबार पनि श्रीमतीसँग अनलाइनमा कुराकानी गरेका थिए । श्रीमतीसँग अनलाइनमा कुरा गर्दागर्दै गो ली चलेको हो ।
कुराकानीको क्रममा अर्जुनले ‘गो ली चल्यो फोन राख–राख’ श्रीमतीलाई भनेका थिए । मामा सुजीतले भने, ‘पछि एकैछिनमा फोन गर्दा फोन अफ भएको रे ।’
यो पनि पढ्नुहोस : सन् २०१९ मा अस्ताएका विश्वका यी १५ चर्चित व्यक्तित्व, जसको निधनमा बिश्वका अरबौं मानिष दुखि भए !
जीवन भण्डारी – सन् २०१९ मा विश्वले कैयौँ चर्चित व्यक्तित्वलाई गुमाएको छ । राष्ट्र तथा सरकार पूर्व प्रमुखदेखि चर्चित कलाकार तथा लेखकहरुसम्म यस वर्ष निधन भएको छ । यस वर्ष ज्या न गुमाएकामध्ये कसैको निधन अदालतमा बयान दिदाँदिदै भएको छ भने कसैले स्टेजमा प्रस्तुती दिइरहेका बेला पनि ज्या न गएको छ । सन् २०१९ मा अस्ताएका विश्वका केही व्यक्तिलाई यहाँ स्मरण गरिएको छ ।
अदालतमा बयानकै क्रममा मोर्सीको निधन
चर्चित साहित्यकार मोरिसनको निधन
३७ वर्ष शासन गरेका मुगाबेको विदेशमा निधन